အယ်ဒီတာများ အကြိုက်အကောင်းဆုံး မြန်မာကဗျာ (၅) ပုဒ် – The Art Garden Rohingya
Feb 10, 2021 AGR Monthly top poems
လလလလလအယ်ဒီတာများ အကြိုက်အကောင်းဆုံး မြန်မာကဗျာ (၅) ပုဒ်၊ ၂၀၂၁ခုနှစ််၊ ဇန်နဝါရီလ။
ရေးဖွဲ့သူ- အောဆီးအုလ္လာ (ခ) ဇာနည်မောင်မောင်
၂၅ ဩဂုတ် သွေးစွန်းယုတ်
ရေးဖွဲ့သူ – Lalmoti Khan @ SFI
အဖြူ အမည်း မကွဲခြားပဲ
အမုန်း၊ အာဃာတ၊ ရန်ငြိုး
အာဂါထက်မှာ ငါရို့အတွက် နက္ခတ်မဟိ…
ညဇာဘက်တိုင်းမှာ လုံလုံခြုံခြုံ အိပ်ခွင့်ပီးပါ
ရေးဖွဲ့သူ– ရိုအီလီယာစ် @ အောင်သိန်း
အတူနေသူတွေက မျက်နှာမလိုက် အဖော်မခံ
ခွဲခြားမှုတွေက မလွတ်ကင်းလို့ ….
ကိုယ်က စိတ်ဖိစီးမှု အပြည့်နဲ့
လူနည်းစု မျိုးဖွားဖြစ်လို့ ….
အမြဲပင် သူ့ကျွန်လိုလို ခံနေရတယ်။
ငါ့အတွက် စည်းသထားတဲ့ မူဝါဒတွေက
ဘဝတစ်ခုလုံး ကျော့ကွင်းထဲမိသလိုလို ဖြစ်နေတယ်။
Feb 12, 2021 AGR Monthly top poems
Editar Ólor Fonsón Rohingya Kavita (5)wá| 2021 Con, Januari Arakan Sára Sayed Hussain @ Ro Maung Kyaw Nu Tui sára honó zagat tórr nái Tui sára honó zagat izzot nái Tui sára honó zagat cánti nái Tui sára cúk faibár rasta nái Tui sára cánti faibar ...
Feb 09, 2021 AGR Monthly top poems, Uncategorized
Editors’ Choice Top5English Poems | January 2021 God Bless, Myanmar By Ishrat Bibi Dear golden land, Myanmar You’re the place that Allah sent me Whatever traps some set to deprive us from you We’re still struggling to stay ...
အယ်ဒီတာများ အကြိုက် အကောင်းဆုံး မြန်မာ ကဗျာ ( ၅ ) ပုဒ်
Jan 09, 2021 AGR Monthly top poems
အယ်ဒီတာများ အကြိုက် အကောင်းဆုံး မြန်မာ ကဗျာ ( ၅ ) ပုဒ် ဒီဇင်ဘာလ ၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် * မင်းဖြေခဲ့ပါ ဘာဆန်ဂျာ - Rebel * မောင့်အလာကို စောင့်နေမယ် - Benazir Salim ( Soe Blossom) * အနာဂတ် ရဲ့ တို့လူငယ် - မေသရဖီ * အကျဥ်းစခန်း - မျိုးချစ်ထွတ် ( အီဗြာဟိမ်း) * လူတိုင်းမြတ်နိုးတဲ့ ဘဝ - Areshard Hussin ...